Yintoni eyenza umfazi uyingqayizivele kwaye akafani nabanye? Ewe, amehlo akhe! Akumangalisi ukuba zithi zibubuko bomphefumlo. Mayelana nempilo yamehlo akuthi nje umbala weprotheni, kodwa kunye nemeko yesikhumba, i-eyelashes, i-tonus yeentloko zeelesi. Xa uneminyaka yobudala, kunzima nakakhulu ukunyamekela kwabo, kwaye ndifuna ukugcina amehlo amnandi kunye nolutsha ebomini bam! Ngelishwa, uninzi lwethu aluyikuchitha ixesha kunye nemali ukutyelela i-salon yobuhle, ngoko kufuneka uqaphele ubuso bakho ekhaya ngokubhekiselele kwamehlo.
Amehlo kufuneka anikwe ingqwalaselo elisondeleyo. Emva koko, sonke siyazi kakuhle kakuhle ukuba "amehlo ayingqamlezo somphefumlo." Ngoko masenze imboniselo yethu ibe yicace ngakumbi kwaye ayikhunjulwe!
Ukuba uhlala kwindawo elomileyo, eluthuli okanye elitshatayo ixesha elide, akumangalisi ukuba ngokuhlwa ungabona ukuba iinkophe zakho zibomvu. Unako ukuthobisa amehlo akho ngokwenza i-lotions, ukuba akunakwenzeka, uze uwasuse nje.
Ukuba umsebenzi wakho unxulumene nokuxinezeleka kombono wexesha elide, njengokusebenza kwikhomputha, kwaye uzive ukhathele, ulimaze okanye ulimale emehlweni, uphazamise, uphumule uze uphumule. Kwimizuzu embalwa, vala amehlo akho okanye uye kwifestile uze ujonge izakhiwo ezikude, ixesha elifutshane, ukhangele izinto ezahlukeneyo. Ukuba imeko ivumela, yenza icompress okanye lotion.
Kwizikhukuphu eziphezulu kunye nezantsi, ulusu lube lucebe kwaye luthenda, luninzi lome kwaye lincinci kakhulu kunezinye iindawo zobuso. Ihlaselwa umthwalo omkhulu kwaye iphendulela kwizifo ezahlukahlukeneyo, uxinzelelo, ukugqithisa, ukukhanya okukhanyayo, imvula, umoya kunye nezinye izinto. Ukuze unqande ukucaphukisa kwakhe, ulula kwaye ngenxa yoko, ukubonakala kwemibimbi yokuqala, kufuneka usebenzise ngokufanelekileyo kwaye ususe izimonyo. Xa usebenzisa izimonyo okanye iimpawu zokunakekelwa kwesikhumba, zenze kakuhle, ngaphandle kokugxininisa kwi-eyeball, kwi-eyelveli ephezulu ukusuka kwangaphakathi ukuya kwinqanaba elingaphandle kweso, kwaye kwinqanaba elingaphantsi, ngokuchaseneyo, ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi. Ngoko uya kufezekisa ubuncinane besikhumba.
Ukususa iziqhumiso kwiinkophe, sebenzisa iimveliso ezikhethekileyo okanye ukhilimu wamanzi, uze ususe i-mascara kwi-eyelashes, ubabambe ngetampu kwaye ucinezele. Ukukhanya kunye nempilo kwi-eyelashes yakho iya kunika ioli yeoli kunye nokucoca kwayo. Kufuneka ukhethe ukondliwa okungenani kanye ngeveki.
Ngaphandle kwesikhumba seenkophe ezinokumisa, ukuba angamniki uncedo oluyimfuneko. Amancinci amancinci, oko kuthiwa "iinyawo zokulila" kubangelwa kukuguga kwebala ngenxa yobume balo. Ukuphosa kwesikhumba kwesikhumba seenkophe kungaphinda kuthinteke kwiimeko zendalo, utshintsho olushushu, umoya, ubushushu, kubanda. Oku kubonakala ngokuqhelekileyo kubasetyhini abasebenza emoyeni.
Ulusu olujikeleze amehlo luyakukhuselwa elangeni. Xa usukula ilanga, hlala ugqoke iziglasi ezimnyama okanye ugubungele iipilisi zakho ngezinto ezingenazo i-UV. Kubalulekile ukukhusela ukuma kwayo. Musa ukulukhupha ulusu ngamehlo kwintshintsho yokushisa, uhlambe ngamanzi afudumeleyo, kwaye akukho nto inokutshisa okanye ebanda kakhulu.
Ungalibali ukujonga ilusu lamehlo, uhlamba ekuseni kunye neengqungquthela zemifuno, ucolile kwiqondo lokushisa. Zingenziwa kwi-chamomile, i-wise, i-mint, i-lemon balm. Emva koko, sebenzisa ukhilimu wesikhumba esikhumbeni (akufanele kube luhlaza kakhulu). Susa okungaphezulu kwe-cotton swab okanye ithawula lephepha. I-krimu iya kukhusela ubuso bakho kunye neentlobo zeebhokhwe, kunye nokwenza ulusu lube lukhulu kakhulu. Faka isicelo sokukhanyisa ukunyakaza, ngokufana nendlela osusa ngayo iifom.
Jonga ukutya kwakho, isikhumba samehlo, kunye nomzimba wonke, kufuna amavithamini. Faka phakathi kwimifuno yokutya, iziqhamo. Ukutya akufanele kube nzima, kodwa kunomsoco kwaye kufane.
Ingxaki eqhelekileyo yowesifazane wesimanjeni iimbalo ezimnyama phantsi kwamehlo. Zivame ukuvela nakumantombazana amantombazana. Isizathu siba nenani elikhulu lezinto, ezifana nokuxinezeleka, ukukhathala, ukungabikho kokulala. Ukusetyenziswa kakubi kokutshaya okanye iziyobisi ezinxilisayo kudlala ekuhleni kwe "izithunzi" kungekhona inxaxheba encinci.
Ngamanye amaxesha unokwazi phantsi kwamehlo "eengxowa". Akusoloko isisiphako sokungcola esibangelwa ubuthathaka besisetyhula kweso, ngamanye amaxesha sisisigxina sesifo, umzekelo, njengesifo senhliziyo okanye inkqubo ye-endocrine. Kule meko, kufuneka ubone ugqirha.
Yinakekele kwaye unakekele amehlo akho, kuba, njengoEtienne Ray wathi: "Amehlo ahlala ethanda kakhulu kunentliziyo."
Ukukhuselwa kathathu kwesikhumba: UBobbi Brown Masks ebusweni - 2016
Iimpawu zokonkcenkceshela kwesikhumba seoli
Ingulube kunye nobusi kunye ne-ginger
Abadali be "Simpsons" banquma ukuzala uHomer noMarge
Oligomenorrhea: ukuphulwa komjikelezo wesini